Chirongwa Chisingakoshi Unofanira Kufungisisa - Yakatsanangurwa By Semalt
Google maps scraper inoshandiswa, yakasimba, ine simba uye yakashandura. Inotsvaga mashoko kubva pamapeji akasiyana ewebhu uye Google maps uye inoguma mhando ye CSV neJSON. Iwe unokwanisa kunyatsogadzirisa mabhizimusi webhusaiti, nhamba dzefoni uye emaresi e-mail neyo basa rakakwana. Zvimwe zvezvinhu zvakasiyana-siyana zvinokurukurwa pasi apa - como fazer seu template wordpress.
1. Zvinyorwa zvinyorwa mumarudzi akawanda:
NeGoogle maps mapurisa, unokwanisa kubvisa guta, zip zip, kuverenga, maitiro, urefu, nguva yekuzarura, uye mazita emabhizimisi zviri nyore. Ichi chikwata chinobatsira kushandura data yakasvibirira muforomu yakarongeka uye inochengetedza nguva yako nesimba. Kana iwe wakaneta nekuunganidza nekunyora deta manyore uye ushaya unyanzvi hwakakwana hwekugadzirira, unofanira kuedza Google maps mapurisa kuti upedze basa rako.
2. Inowanikwa mune zvinyorwa zviviri:
Kusiyana nedzimwe nhepfenyuro dzemazuva ose, Google maps scraper inowanika mune dzimwe shanduro dzakasiyana: Standard edition uye Demo edition. Rhidhiro yemiitiro inoita kuti iwe uedze iyi software uye unakidzwe nemishandiro ayo kusvika kwemazuva gumi nemashanu. Shanduro yaro yakazara ichakubhadhara $ 99 uye inosunungura zvinoshamisa zvinowanikwa nezvimwe zvinhu.
3. Target zviuru zvemaji zuva rega rega:
Chimwe chezvinhu zvakasiyana zvikuru zveGoogle maps scraper ndechokuti inotarira mapeji e-150 000 pazuva uye hazvibhadhari chinhu chebasa iri. Ichi chishandiso chakanaka kune vese mapurogiramu uye vasiri mapurogiramu uye inoita kuti zvive nyore kwavari kutsvaga data kubva kumapeji akawanda vasati vatenga bhadharo yayo.
4. Inotsigira mafomu akawanda:
Izvi zvakasimudzwa web scraper kana dhidhadha yedhesi inochengeta mashoko ako muJSON, RSS uye CF mafomu; iwe unogona kuzarura data yaunoda muExcel pamashizha kana kuitumira iyo zvakananga kuGoogle Drive yako.
5. Inobvumirana uye yakavimbika:
Pane nhamba huru kudhinda data software uye zvishandiso zvisingatsigire misoro yakawanda. Kusiyana nekutumira. io uye Kimono Labs, Google maps scraper inowirirana neWindows 7, Microsoft XP, Windows 8 uye Windows 10. Mukuwedzera, inowirirana neGoogle Chrome, Firefox, uye Internet Explorer uye inoshanda yakavimbika.
6. Unoratidza mhinduro yacho zvakarurama:
Kana uchida kuramba uchicherechedza nekuchengetedza huwandu hwemashoko apo huri kunyorwa, unofanira kuedza Google maps scraper. Iyi sangano inokubvumira kuona dheta uye kugadzirisa zvose zvikanganiso zviduku zvayo. Uyezve, inopa mikana yekupinda nenzira dzakasiyana-siyana dzekutsvaga uye mazwi ezvinyorwa panguva imwechete.
7. Zvinoshanda nyore uye zviri nyore:
Google maps mapurisa zviri nyore kushandisa uye ane user-friendly interface. Kana uchangobva kusarudza chikwata kana kupinda mukati mechirungu uye nzvimbo, unofanira kungotanga kutsvaga uye kumirira zvawakabuda kwemaminitsi mashomanana. Google mapepa yedhadhadha yedheta akakodzera kumarudzi ose emabhizimisi uye inogadzira dzakanaka uye dzinoverengeka mafaira eCVV pakarepo.
8. Bvisa chero kupi zvako, chero nguva ipi zvayo:
Unogona kushandisa shanduro iyi pa smartphone yako, mahwendefa kana kombiyuta uye anogona kuita mabasa ako chero kupi zvako, chero nguva. Iwe haufaniri kunetseka pamusoro pemigumisiro yaro. Ichi chishandiso chichapa data yakarurama pasinei nokuti rudzi rwechigadziro chauri kushandisa uye chakakodzera kune velelancers nevhizimisi. Unogona kutora mapeji masikati uye mapeji machena nemusangano uyu.